I-China Professional Tattoo Thermal Copier, Dlulisa umshini womshini wokuphrinta nokwakha | MOLONG
Umshini Wokudlulisa Okushisayo WeTattoo
(1) Fuss operation free – isebenza njengomshini wefeksi
(2) Iyunithi ehlanganisiwe ngeke ithathe indawo ebalulekile kwisitudiyo sakho se-tattoo
(3) Fushanisa isikhathi osichithe ekudwebeni isithombe ngqo esikhunjeni
(4) Ake uthole isithombe esingahlukanisiwe, esigcwele, nesimangalisayo
(5) Yenza i-tattoo yakho isebenze kahle
(6) i-USB iyahambisana, ingaphrinta izithombe namakhophi agcinwe kwi-PC yakho
(7) Kulula ukuthatha, isisindo esincane, intengo evumayo, ikhwalithi ephezulu
(8) Isitoko esigcwele ngaso sonke isikhathi
Iyaphatheka kunanoma imuphi umlingisi wendabuko.Isisindo esincane kepha umsebenzi ofanayo.
Ihambisana ne-adaptha evumelana nokufakwayo okungu-100-240V Futhi ukuhola kwamandla kwawo wonke amazwe.
4.Durable futhi kulula ukugcina.
1 x Umshini wokudlulisa
1 x ibhukwana lesiNgisi
Ubuningi obukhulu, amanani entengo aphansi !!!!!
Ububanzi Bokuskena Okuphumelelayo: 210 mm
Usayizi wedokhumenti: A5-A4
Ubukhulu Bombhalo: 0.06 mm-0.15mm
Okujwayelekile: Ukuhamba phakathi kwezinhlobo zokudonsa zesimo sokukhanya. Lapho umsebenzi wekhophi ojwayelekile uqala, ukukhanya okuvamile kuyasebenza.
Ukujula 1: Ukusetha imibhalo ekopishwe ngokujula 1. Lapho ukujula 1 kusebenza, ukujula 2 kuyacima
Ukujula 2: ukusetha imibhalo ekopishwe ngokujula 2. Lapho ukujula 2 kusebenza, ukujula 1 kuyacima.
Kopisha: Ukuqala umsebenzi wokukopisha.
Misa: Ukumisa umsebenzi wokukopisha ..
Amandla: Isibani sikhombisa ukuthi umshini ulungele ukusebenza.
Iphutha: Isibani ukukhombisa ukuthi kukhona okungalungile okwenzekile emshinini. Lapho i-TPH ishisa ngokweqile, ukukhanya kuyaqhubeka.
1. Uma ufuna ukumisa umsebenzi wokukopisha, sicela ucindezele ukhiye "STOP".
2. Uma isignali yesixwayiso izwakala, amalambu e-ERROR ayasebenza futhi ayeke ukukopisha ngaphambi kwesikhathi;
I-Tattoo Thermal Copier ivumela umdwebi we-tattoo noma uchwepheshe ukukopisha ukwakheka ephepheni le-stencil ngokushesha nangempumelelo ngezinyathelo ezimbalwa ezilula.
Le Tattoo Thermal Copier inesisindo esingu-1.6 kg / 3.5 lb kuphela, ilula futhi incanyana ngakho-ke kulula ukuyiphatha. Icinene ngokwanele ukulingana cishe noma yikuphi. Ungenza ukudalwa kwe-tattoo nganoma yisiphi isikhathi noma kuphi lapho uthanda khona
Le phrinta ye-tattoo inejubane lokuphrinta lokudlulisa okusheshayo, ukushisa okuphansi, umsindo ophansi nokusebenza okuzinzile. Usayizi Wephepha Lokudlulisa Ohambisanayo: I-approx 8.5 intshi x 11 intshi (W * L). Iyahambisana namandla ka-100-240v, angakusebenzela wena emhlabeni wonke
Le phrinta engasindi futhi ingasuswa ngokushesha futhi kulula ukuyigcina, ikunikeze lula ngokwengeziwe. Ungenza ukudalwa kwe-tattoo nganoma yisiphi isikhathi noma kuphi lapho uthanda khona.
Yenziwe ngezinto ze-ABS, okungokwemvelo, okuphephile nokuhlala isikhathi eside ukusetshenziswa kwesikhathi eside. Umshini ophakeme kakhulu we-tattoo wabadwebi be-tattoo Kulula ukusebenza. Akukho ukulungiswa okudingekayo nokonga isikhathi.
Langaphambilini 32mm MO Insimbi Engagqwali Igobolondo Adjustable Tattoo Grip for Tattoo Needle Cartridges
Olandelayo: Ochwepheshe beCopper Tattoo Coil Machine Gun I-CNC Eqoshiwe Yethusi Imishini Yemidwebo Yezandla
Magic 5CM Grips Cover Nokunwebeka Yesigcilikisha Amakhava D ...
Esobala alahlwayo Tattoo Grips 25MM Nge S ...